Xubnaha Congress-ka ayaa ku baaqay in la baaro xogta sheegeysa in Ruushka lacag ku bixiyey… – Hagaag.com
Xubnaha Congress-ka ayaa ku baaqay in la baaro xogta sheegeysa in Ruushka lacag ku bixiyey…
Qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo arrinta ah in militariga Ruushka ay lacag siin jireen Taliban ee Afghanistan si loo laayo askarta Mareykanka iyo xulafadooda, halka Madaxweyne Donald Trump uu sheegay in uusan ka warqabin wararka sheegaya arrintan.
Trump ayaa ku sheegay sababta aan warkan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka Mareykanka aysan u arkin xog lagu kalsoonaan karo.
Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo aad ugu dhow Trump ayaa sheegay in uu filayo in maamulka Trump oo eedaha nuucaas ah si dhab ah u qaadan doono. Waxa uu xusay in Congress-ka uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada Ruushku ay lacag ku siiyeen Taliban si loo laayo askarta Mareykanka, islamarkaana Mareykanka looga saaro gobolka.
Senator Kirsten Gillibrand oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa dalbatay Congress-ka inuu baaro arrintan si loo ogaado baaxadda lacagta, oo ay ku jirto in la ogaado cidda lasiiyay, cadadka lacag ah ee ku baxday, iyo in la aqoonsado qof kasta oo Mareykan ah oo ku dhintay sabab la xiriirta lacagta la sheegay in Ruushku ku bixiyey weerarada Taliban.
Sida ay daabacday Washington Post, 28 ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay lagu dilay Afghanistan. Tiro kale ayaa waxaa dilay askar ka tirsan ciidamada Afghanistan kuwaasi oo ay jariidadu sheegtay in laga yaabo in ay si hoose ula shaqeynayeen Taliban.